China X6 volom-borona fanamboarana sy orinasa | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
Thermometer infrared azo antoka dia azo entina miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta ary avo lenta, izay afaka mandrefy haingana ny mari-pana amin'ny vatan'olombelona na ny maripanan'ny zavatra amin'ny fisehoan'ny LCD mazava.
Manome fandrefesana tsy fifandraisana mazava tsara hanome anao ny famakiana marina ao anatin'ny iray segondra ho an'ny fampiasana mahomby sy mora kokoa
Safidio ny mari-pana amin'ny famakiana amin'ny ° C na ° F
Fampisehoana an-kolaka ho an'ny famantarana tazo rehefa avo ny hafanan'ny vatana
Ny thermometer dia afaka mitahiry ny angona 32 refesina farany; Azonao atao ny manome taratra mora foana ny fiovan'ny mari-pana amin'ny dokotera amin'ny fanaovana diagnostika.
Fampisehoana LCD lehibe misy ny fiovan'ny loko satria mihabe ny mari-pana. Fampisehoana maivana mba hahitanao ny maripanao na dia ao amin'ny maizina aza. Mandritra izany fotoana izany, na dia matory aza ny zaza, ny mari-pana dia azo refesina mangina ary tsy misy korontana
Matetika mandeha ho azy aorian'ny 10 segondra tsy misy fampiasana intsony ka tsy mila miahiahy momba ny fanadinoana ny fanakatonana azy ianao
Ampiasaina handrefesana ny hafanan'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny sensor maranitra mandroso, ary ny hafanan'ny efitrano dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fandrefesana nomena.
Ny haitao infrared tsy misy fifandraisana dia azo antoka sy tsara kokoa, izay azo ampiasaina hanenana ny risika fandotoana sy hampihenana ny mety fiparitahan'ny aretina.
Ny maripana dia azo jerena ao anatin'ny halavan'ny fandrefesana 3cm (1.2 inch), mahasalama kokoa sy mety kokoa; aza manahy mihitsy ny amin'ny fanelingelenana ny zaza matory.
Namboarina ergonomika niaraka tamin'ny tahony tsy slip, izay mety kokoa amin'ny fandrefesana ny mari-pana ho an'ny olon-dehibe, ny zaza ary ny zaza vao teraka.
Previous: X6 mahitsy
Manaraka: X6 volomparasy